Nezvedu - Shandong Dassaw Import uye Export Co, Ltd.
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana zvichiramba zvichivandudza zvido zveupfumi nemagariro. Tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kubva kumafambiro ese ehupenyu kuti vatibate kuitira ramangwana bhizinesi hukama uye kubudirira mukuwirirana!
Sangano redu. Yakavakirwa mukati memaguta emunyika akabudirira, vashanyi vari nyore kwazvo, akasarudzika mamiriro enzvimbo uye hupfumi. Isu tinoteedzera "inotarisana nevanhu, zvine hungwaru kugadzira, kufunga, kuvaka inoyevedza" sangano. Strict yepamusoro mhando manejimendi, inoshamisa sevhisi, inonzwisisika mutengo isusu kumira kwedu pamafungiro emakwikwi.
Kuti tikwanise kusangana nezvinodiwa zvinowedzera zvevatengi kumba nekukwira, isu ticharamba tichitakura mberi mweya webhizinesi we "Unhu, Kugadzira, Kubudirira uye Kiredhiti" uye shingairira kumusoro kwazvino maitiro uye kutungamira fashoni. We noushamwari kuti kushanyira boka redu uye kuti pamwe.
Isu tinomisikidza yakasimba sisitimu yekudzora system. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo kana iwe uine chero mibvunzo. Isu tinofara kushandira mutengi wese.
Chekuita chete chigadzirwa chemhando yepamusoro kusangana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvedu zvese zvakaongororwa zvisati zvatumirwa. Isu tinogara tichifunga nezvemubvunzo padivi pevatengi, nekuti iwe unokunda, tinokunda!
isu tinotarisira nemoyo wese kutanga hukama hwakanaka uye hwenguva refu bhizinesi nekambani yako inokudzwa kuburikidza nemukana uno, zvichibva pakuenzana, kubatsirana pamwe nekuhwina-kuhwina bhizinesi kubva ikozvino kusvika mune ramangwana. "Kugutsikana kwako ndiko kufara kwedu".
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvedu uye nekuona zvese zvigadzirwa zvedu, ndapota shanyira webhusaiti yedu. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota inzwa wakasununguka kutiudza isu. Ndatenda zvikuru uye ndinoshuvira kuti bhizinesi rako rigare rakakura!